Dad rayid ah oo lagu laayay degamda Cadale oo katirsan Shabeelada Dhexe - Tilmaan Media
Dad rayid ah oo lagu laayay degamda Cadale oo katirsan Shabeelada Dhexe
Wararka ka imaanaya degmada Cadale ee Gobolka Shabeelada Dhexe ayaa sheegaya in 5 qof oo rayid ah ay dablay hubaysan laayeen. Sida lalaayay ayaa waxaa la sheegayaa in ay ahaayeen dad samaynaya subcis quraanka kariimka.
Dablayda weerarka fulisay ayaa goobta ka baxsaday ilaa iyo haddana lama sheegin haybtooda iyo sababta ay dadkaan u laayeen. Falkan arxan-darada ah ayaa dadka deegaanka ay ka argagaxeen, waxaana baraha bulshada lagu soo bandhigay meydadka shanta macalin.
Maamulka degmada iyo Gobolka wali wax war ah kama soo bixin.
Macalimiintan la laayay ayaa lagu kala magacaabayay:
1. Sheikh Daahir Xasan Cali Dheere
2. Macalin Maxamuud Canbuure
3. Macalin Maxamed Xuseen Axmed Cadaawe
4. Macalin Mukhtaar C/llaahi Cilmi
5. Ow Muxumud Xasan Cali Dheere
Maraykanka oo doonaya inuu duqaymo kadhan ah Alshabaab kasameeyo Kenya
Amensty oo kubaaqday baaritaan lagu sameeyo haweenay rayid ah oo ciidanka Mozambique toogteen
Axmed Madoobe oo kulan laqaatay xubnaha labada aqal ee laga soo doorto Jubaland
Markab Ganacsi oo toos ugu kala gooshi doona Turkiga iyo Soomaaliya
Wadahadallo hordhac ah oo u bilawday Turkiga iyo Giriiga
Muxuu kadhiganyahay heshiiska-doorasho ee Muqdisho lagu gaaray?
Madaxweyne Farmaajo oo magacaabay Ra’iisul Wasaare cusub
Xawaaladaha Soomaalida oo lagu eedeeyay u adeegida kooxaha kaganacsada hubka sharci-darrada ah
Ciidamo katirsan Nabadsugidda oo xirtay waddo kutaalla Muqdisho